Generator Raacayaasha Instagram ➡️ Kuwa raacsan ▷ ➡️
February 28, 2019 0 comments 8117
Instagram waa barnaamijka BOM ee shabakadaha bulshada, waa midka ugu weynaaday sanadihii la soo dhaafay, oo gaaray boqolaal milyan oo dad ah oo ku isticmaala saldhigiisa isticmaalaha. Bilowgeedii waxay ahayd codsi lagu soo rogo, la wadaago sawirro iyo fiidiyowyo, laga soo bilaabo 2012 markii ay iibsatay FACEBOOK waxay billaabatay koboc deg deg ah.
Laga soo bilaabo sanadka 2103, Instagram wuxuu bilaabaa in laga isticmaalo kombuyuutarrada isla markaana wuxuu bilaabayaa hirgelinta qoraallada maalgaliyay, aaladda u soo jiidata shirkadaha soo aqoonsanaya maaraynta saaxiibtinimo inay u adeegsadaan hab suuq-geynta suuqa.
Waqtigan xaadirka ah, haddii aadan ku jirin instagram "Ma jirtid" in kastoo ay u muuqato wax la buunbuuniyey waa sidaas oo kale, inbadan oo raaceyaal ah meherad kasta oo ay leedahay, ayaa wax soo saarkeedu badnaan doonaa. Sidee loo jiraa loona helaa kuwa raacsan si hufan? Si fudud loo adeegsado matoor si aad uga hesho dad badan oo raacsan barta instagram. Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa sida.
Codsiyada koronto dhaliyaha ugu fiican Instagram Followers
Fikradda ayaa ah in la helo taageerayaal badan, haddii aad leedahay xisaab shaqsiyeed ama ganacsi, waxaan ku guuleysan doonnaa taas iyada oo loo marayo koronto-dhaliyaha kuwa raacsan ee bogagga ama xisaabaadka shabakadda.
Waa maxay ikhtiyaarka ugu fiican? Midda aad sida ugufiican uhesho, halkan waxaan kaa caawinaynaa inaad aragto ikhtiyaarada jira Aynu kahadalno codsiyada (App)
Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loogu talagalay Android, waxay kuu oggolaaneysaa qaabkeeda bilaashka ah inaad ku mideyso dhammaan kuwa raacsan diiwaan gelinta, yaa joojiyey inuu ku raaco, yaa ku raacaya, boggaga, waxyaabaha jecel iyo taageerayaasha. Noockeeda lacag bixinta, waxaad ku arki kartaa kuwa raacsan, ee kaa xanibay, kuwa raacsan cirfiidka sida sawirada, waad la wareegi kartaa koontada, taas oo ah waxa ugu muhiimsan ee lagu helo taageerayaal badan. Ka raadi App Store.
Waa codsi dhakhso ah, bilaash ah waxaan ka heli karnaa App Store. Astaamaheeda ugu weyni waa in ay tahay mid fudud oo saaxiibtinimo leh oo xitaa xiiso leh tan iyo markii ay ku saleysan tahay adeegsiga lacagaha dalwaddii ah ee aad ku beddelato waxyaabaha aad jeceshahay oo aad raacdo, waxaa loogu talagalay iOs ama Android.
Loogu talagalay Iphone, waa codsi aad u dhakhso badan oo dhaliya dhaliyayaal waxaadna heli kartaa dabagal wanaagsan (raad raac) kuwa raacsan, kuwa soo diray codsiyada, kuwa aan rabno inaan raacno, kuwa aan hada dooneynin, kuwa faallooyinka iyo xilalka guuleysta. Waxaan ka helnay AppStore.
Bogagga koronto-dhaliyaha 'Instagram' ee 'Followers' badan
In kasta oo App-ka uu naga caawinayo inaan la helno kuwa raacsan bogagga Shabakadda, waxaan ka heli doonnaa tayada kuwa raacsan ama waxa isku dareenka ka ah raacayaasha. Hadda waxaan arki doonnaa bogag kaa caawin kara hiigsiga kordhinta tirada dadka raacsan koontadaada 'Instagram'.
Aad u fudud oo saaxiibtinimo leh, dhakhso leh, waxay leedahay nooc bilaash ah oo aad maalin walba heli karto oo aad ku heli karto ilaa 20 jecel iyo 10 maalinle ah oo raacaya, faa'iido darrada boggan ayaa ah inaad ku jawaabto xog uruurinta xogta shaqsiga Nooca la bixiyay wuxuu u dhexeeyaa 40 jecel sawiro iyo ilaa 2.550 like s cinwaanka webka waa www.mrinsta.com Waxaad ku bixin kartaa kaararka Paypal ama kaararka deynta.
Bilaash fudud oo dhakhso ah, laakiin ma ahan mid si hufan u shaqeynaya oo waa inaad buuxiso sahaminno, marka lagu daro wadaagista Twitter iyo Facebbok, fikradeena waa halis yar.
Aad u dhakhso badan oo saaxiibtinimo leh, waxay si otomaatig ah wax uga qabataa Instagram, waxay siisaa kuwa raacsan oo dhab ah, waxay leedahay qorshe tijaabo oo 3-maalmood ah oo bilaash ah. Nooca la bixiyay wuxuu leeyahay afar qorshe oo ah 30,90,180 iyo 365 maalmood oo waxqabadyo ah, autofollws, autoOnfollwers, liisyo kala jaad ah, hashtags loo qaybiyay. Waxaad ka heli gudaha www.speedygram.co/es
Boggan waxaa si aad ah loogu talinayaa maadama ay tahay mid aad u dhakhso badan, qiimo wanaagsan, lacag bixinno sugan, waxay leedahay macluumaad iyo adeeg adeegsade si ay uga jawaabaan wixii su'aalo ah adoo adeegsanaya emayllo, adeeg qarsoodi ah, taas oo ah, ma arki karaan inaad qandaraas ku qaadatay adeeggan, furayaasha la'aan . Waxaa kaliya loogu talagalay shirkadaha diiwaangashan
Dunida dunidoo dhan, waa muhiim in ay ku gartaan oo sidaan horeyba kuugu sheegay in ay jiraan, hadaad shirkad leedahay ama aad xiisaynayso in lagu yaqaan, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho bogagga lacagta ah, maadaama ay ku siinayaan kuwa aad u tayo badan ee raacsan iyo Waxay bixiyaan adeeg la hubo oo ah inta ugu badan, sidaa darteed u qoondeynta qayb yar oo ka mid ah miisaaniyadda si loo kordhiyo tirada dadka raacsan waxay kuu ballan qaadayaan inaad ku guuleysato xeeladahaaga suuq geynta, waxaan dammaanad ka qaadaynaa in kuwa raacsan, jecel iyo faallooyinka ay si weyn u kordhin doonaan.
Xisaabaadka ama Raad-raacayaasha Soo-Saaraha Guud
Haddii aad kalsooni ku qabtid dhammaan codsiyadan laakiin aad weli rabto inaad hesho raacdo badan, waxaa jira hab aad ku heli karto adigoon bixin wax qalab ah ama adeegsi ah.
Bogga Instagram lafteeda waxaa ku jira xisaabaadyo dowladeed oo aad ku raacdid raacitaanka kuwa waxyar ka dhaqso badan qaababkii caadiga ahaa. Kaliya dhig sumadda #Follow4Follow ee mashiinka raadinta ee Hashtag.
Halkaas waxaad ka heli doontaa taxane xiriir ah oo muuqaallada Instagram halkaas oo lagu siin doono kuwa raacsan iyada oo aan wax maalgashi ah lagu darin, marka lagu daro kuwa raacsan. Iyagu waa 100% dhab ah. Habka loo helo kuwa raacsan xisaabaadka ayaa ah sida soo socota:
1.- Meel ku dhex yaal mashiinka raadinta #follow4follow
2.- Gali koontada oo abuureysa kalsooni badan
3.- bilow inaad raacdo koontada aad dooratay
4.- koontadan waa inaad raacdaa dhammaan isticmaaleyaasha safka ku jira
5.- Ka dib tan sug daqiiqado yar kadib. Kuwaan soo socdaa waxay bilaabi doonaan inay ku soo raacaan
Hawshani way ka gaabisaa barnaamijyo si aad uhesho kuwa raacsan instagram, laakiin waa wada ogolaansho halista maxaa yeelay wax walbaa waxay ku shaqeeyaan isla codsiga Instagram.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad la socotaa in dadkani ay si dhif ah u sameeyaan is-dhexgal kale sida jeceshahay ama faallooyinka, ilaa waxyaabahaagu aad u fiican yihiin, iyaga uun bay ku daba socon doonaan.
1 Codsiyada koronto dhaliyaha ugu fiican Instagram Followers
1.3 DIIWAAN GALINTA
2 Bogagga koronto-dhaliyaha 'Instagram' ee 'Followers' badan
3 Xisaabaadka ama Raad-raacayaasha Soo-Saaraha Guud
DM Instagram ama Farriin Toos ah Maxay tahay iyo sida loo isticmaalo?
Tilmaamaha Suuqgeynta '23' ee Instagram
Yaa badbaadiya sawirradayda barta Instagram?